तिथि मेरो पत्रु » तपाईं एक पत्रु प्रतिबद्धता लागि तयार हुनुहुन्छ?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 19 2020 |2मिनेट पढ्न
विश्वविद्यालय मा म थाह को राशि घरपालुवा जनावरको खरीद र / वा अपनाएर थियो, जबकि केहि मैले देख्यो. म पोस्ट-माध्यमिक शिक्षा-बिरालोहरु को आफ्नो वर्ष समयमा जाते सबै विभिन्न प्रकार प्राप्त थिए मित्रहरुलाई र चिनेजानेका थियो, कुकुर, चरा, माछा, खरायो, hedgehogs र पनि पट पेट सुंगुर.
यो बाहिर चलान र घरपालुवा प्राप्त गर्न एकदम आकर्षक देखिन सक्छ तर तपाईं घरपालुवा सहितको प्रतिबद्धता सोच रहे? हो, प्रेम आफ्नो पाल्तु जनावर तपाईं बिना शर्त र जीवन मा सबै उच्च र Lows समयमा तपाईं को लागि हुन, तर तिनीहरूले हेरविचार को एकदम बिट आवश्यकता के. यहाँ तपाईं तयार हुनुहुन्छ भने तपाईं निर्णय मदत गर्न केही सुझाव हो:
जनावर आर्थिक प्रतिबद्धता हो
केही घरपालुवा जनावरको कम लागत हुन सक्छ र केही जान्छन् कम लागत मा सुरु तर निरन्तर तपाईं एउटा सानो भाग्य खर्च गर्न सक्छन्. वर्षौंदेखि, मेरो कुकुर एकदम सजिलो रखरखाव भएको थियो. उहाँले एउटा सानो कुकुर छ, त्यसैले आफ्नो खाना सेवन सानो थियो र त्यो शायद पशु चिकित्सक भ्रमण थियो. तथापि, त्यो लगभग छ 15 र अब वृद्ध र बिरामी. उहाँको दबाइहरु एक हात र एक खुट्टा हरेक महिना खर्च. मानिसहरूले जस्तै, पशु उमेर वा जीवनशैलीमा को जुनसुकै बिरामी. तपाईं मुद्रा खोल खर्च गर्न सक्छन्, साथै आफ्नो पाल्तु जनावर लागि समय रूपमा? यो विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता कुरा हो.
जनावर एक समय प्रतिबद्धता हो
केही घरपालुवा जनावरको "कम रखरखाव" हुन भने गर्दै गर्दा तिनीहरूले अझै पनि एक दैनिक आधार मा तिनीहरूलाई प्रतिबद्ध केही समय चाहिन्छ. भोजन, यो जनावर को दैनिक हेरविचार गर्न आउँदा कोरीबाटीमा र व्यायाम विचार गर्न केही कुराहरू छन्. तपाईं लगातार यात्रा वा घर मा त स्कूल वा काम मा धेरै समय खर्च गर्दै भने, यो समय को लागि घरपालुवा हुनुको रही पकड राम्रो विचार हुन सक्छ. तपाईं लगातार दूर हुन्छन् आफ्नो पशुहरू पालतू-बस्न उनलाई सोध्नु छन् भने यो अरूलाई बोझ बन्न सक्छ. आफ्नो जीवन र अधिक घरपालुवा प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री समय हुनेछ बसे हुन्छ शायद जब.
जनावर दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो
घरपालुवा अहिले आफ्नो जीवन शैली फिट हुन सक्छ जबकि, हुनेछ तिनीहरूले अर्को वर्ष? मा5वर्ष? मा 10 वर्ष? म घरपालुवा प्राप्त गर्ने चाहना बुझ्न, तर पशु दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ हो कि स्वीकार. घरपालुवा जनावरको थियो जो म थाहा थुप्रै मानिसहरूले अब हेरचाह सक्छ किनभने सडक तल पछि उनलाई दिन थियो. तिनीहरूले स्नातक र एक नयाँ शहर वा अपार्टमेन्ट गर्न उत्प्रेरित तिनीहरूलाई आफ्नो पाल्तु जनावर लिन असमर्थ थिए स्कूल मा तर एक पल्ट गर्दा तिनीहरूले पालतू थियो. यो कुनै एक बनाउन चाहन्छ एक निर्णय हो, आफ्नो प्रिय पाल्तु जनावर संग भाग राख्दा, या त अस्थायी वा स्थायी रूपमा. समय प्रतिबद्धता गर्न समान, आफ्नो जीवन एक सानो कम व्यस्त छ सम्म सायद तपाईं पर्खन.
तपाईं बाहिर जाने र घरपालुवा अपनाउने त्यसैले पहिले, आफ्नो अनुसन्धान गर्न र भविष्यको लागि आफ्नो योजना सोच्न. तपाईं चाहनुहुन्छ पत्रु प्रकार मा हेर, के आवश्यक छ ठीक तिनीहरूको हेरविचार र ती आवश्यकताहरु आफ्नो वर्तमान जीवन शैली फिट. ढिलाइ आफ्नो तयार सम्म घरपालुवा रही संग केहि पनि गलत छ, त्यसैले एक निर्णय हतार छैन.